Warar dheeri ah: Qaraxii ka dhacay albaabka xafiiska R/W Saacid - Caasimada Online
Home Warar Warar dheeri ah: Qaraxii ka dhacay albaabka xafiiska R/W Saacid
Warar dheeri ah: Qaraxii ka dhacay albaabka xafiiska R/W Saacid
Qarax ismiidaamin ah ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Qaraxaan oo xoog badan ayaa goor dhow waxaa laga maqlay Madaxtooyada Soomaaliya sida ay sheegeen goobjooga ayaal ku sugan.
Warar aan helnay sheegaya in ruux naftiisa haliga ah uu isku qarxiyay inta u dhaxaysa safaarada Itoobiya iyo guriga Raysal wasaaraha oo ku yaala Afafaafka hore ee madaxtooyada Soomaaliya.
Wararka ayaa sheegaya in Nin kamid ah Shaqaalaha Madaxtooyada uu isku dayay inuu gudaha u galo xarunta taliska nabadsugida, kadibnah ay soo celiyeen Ciidamda. Ninkaan ayaa kadib isku hor Qarxiyay Albaabka hore ee Madaxtooyada.
Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay 1 askari 5 kalena wey ku dhaawacmeen oo dhamaantood ahaa ilaalada Ra’isul wasaare Saacid, iydoo aan la ogeyn qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qarxaasi hadana waxaa jira warar is dabajoog ah oo ka imaanaya gobta uu qaraxa ka dhacay